Blogger of this week: Anish Bhattarai - MeroReport
Blogger of this week: Anish Bhattarai
धरान निवासी अनिश भट्टराई वी पी कोईराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा काम गर्छन तर उनको खास रुची चाँही वेब प्रोग्रामिङ्गमा छ । यसको अलवा अनिश वेब होष्टीङ्ग सम्बन्धी काम समेत गर्ने अनिश यस साता मेरो रिपोर्टमा साताका ब्लगर हुन सफल भएका छन । सधैका साताका ब्लगरसंग जस्तै यसपाली हामीले अनिशसंग पनि ब्लगिङ, नागरिक पत्रकारिता र मेरोरिपोर्टका बिषयमा कुराकानी गरेका छौँ ।
सन २००४ देखी मैले वेब होष्टिङ्गको काम सुरु गरेको हो । त्यसैताका ब्लगिङ् गर्नकै लागि भनेर एउटा वेब साईट खोलेको थिएँ तर त्यसको भिजिट राम्रो थिएन, बन्द गरी दिए । सन २००७ देखि साईबर चौतारी भन्ने ब्लगलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा छु ।
आत्म सन्तुष्टीको लागी !
मेरो आफ्नो ब्लगमा (साईबर चौतारी) चाँही पुर्णत: सुचना प्रविधि सम्बन्धी लेख राखिने गरिन्छ । माइसन्सारमा कहिलेकाँही दैनिक जिवन र राजनितिसँग सम्वन्धित ब्लग पनि लेखेको छु । मलाई कम्प्युटर, सुचना प्रबिधी सम्बन्धी ब्लग लेख्न मन पर्छ ।
नेपालीमा ब्लगिङ् गर्ने हो भने अधिकाँसले आत्म सन्तुष्टीको लागि नै गर्ने हो भन्नुपर्ला तर अँग्रेजीमा लेखीने ब्लगले आम्दानी गर्ने सम्भावना पनि छ । नेपालमा व्यवसायिक ब्लगिङ्गको सम्भावना छ तर यसको लागि ब्लगरमा व्यवसायिक लगाव र सोचको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ ।
त्यस्तो बिशेष त केही छैन । भर्खरै माईसन्सारमा प्रधानमन्त्रीलाई खुल्ला ईमेल भनेर एउटा ब्लग लेखेको थिएँ । प्राविधिक विषयमा गरिएको टिप्पणी भएको हुनाले गलत ठाँउमा पोष्ट गरिएछ भन्ने लाग्यो । बिषयबस्तुप्रति मलाई विश्वास हुदाँहुदै पनि केही पाठकहरुले आग्रह पुर्वाग्रहको आधारमा कमेन्ट गर्नु भो भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यसै लेखको सम्बन्धमा मलाई ईमेल पनि आए त्यसमा "तपाईलाई कुन वाक्य वा प्याराग्राफ मन परेन" भनेर सोध्दा मैले ( बाबुरामले गरेको काममा प्रश्न उठाएकोले) पुरा लेख नै पढिन भन्ने खालको प्रत्युत्तर पाँए । पुरा लेख नै नपढी कसरी कमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो । तर मलाई यस खालको अनुभव पार्ट अफ ब्लगिङ जर्नी हो भन्ने लागेको छ ।
एउटा ब्लगरका नाताले मुलधारको पत्रकारिता र ब्लग मार्फत गरिने नागरिक पत्रकारिता बिच समानता वा फरक के पाउनुभएको छ ?
म मुलधारको पत्रकारिताको पाठक मात्र हो । पत्रपत्रिका हेर्दा मुलधारका पत्रकारहरु कहिलेकाँही असहिष्णु भए झै लाग्छ । 'लाईन' को पत्रकारिता गर्न लागेको आभास हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिक पत्रकारिताले सहि र तथ्य कुरा बाहिर ल्याउने मात्र हैन समाचारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स पनि गर्छ भन्ने लाग्छ ।
मेरो बिचारमा पत्रकारिता र ब्लगगिङ्ग फरक कुरा हो । पत्रकारले ब्लगिङ्ग गर्न सक्छ तर ब्लगिङ्ग गर्ने सबै पत्रकार हुनुपर्छ भन्ने म मान्दिन । पत्रकारहरुको पनि आचारसंहिता छ तर त्यसको के हालत भै रहेकोछ सबै सामु प्रष्ट छ । त्यसैले मलाई ब्लगरहरुलाई स्वछन्द छोडिदिनु पर्छ भन्ने लाग्छ । ईन्टरनेटमा यति धेरै सामग्री छन कि राम्रो नलेख्ने र जथाभावी लेख्नेले पाठक नै पाउन सक्दैन । कुनै पनि ब्लगको जिवन भनेको त्यसले भिजिटर पाउञ्जेल मात्र हो । पाठकहरु टिकाउन ब्लगर आफै सेल्फ सेन्सर र अनुशासित हुनु पर्छ भन्ने लाग्दछ ।
तपाइले निरन्तर रुपमा ब्लग पनि लेखिरहनु भएको छ, तपाइलाई थाहा छ ? नेपालमा नागरिक पत्रकारिता प्रवर्धन गर्न र सामाजिक संजालका रूपमा http://meroreport.net/पनि सुरू भएको छ नि ?
धेरै अगाडि देखि नै मैले मेरो रिपोर्ट हेर्न थालेको हो । राम्रो छ । यस खालको साईटको कन्सेप्ट नेपालीहरुको लागी नयाँ हो भन्ने लाग्दछ ।
साईटको कन्सेप्ट राम्रो छ । तर एउटा वेब डेभलपरको नाताले साईटको ले आउट परिमार्जन गर्न पर्ने देखिन्छ भन्न चाहन्छु ।
मेरो ब्लग ठेगाना : http://www.enepal.net.np
Comment by MeroReport on September 29, 2011 at 12:07pm
Congratulations Anishji. Hope to see more blogposts in the days ahead and wish youahappy Dashain.
Comment by Ajeeta Sigdel on September 29, 2011 at 10:19am
Congratulations Anish ji !!
Comment by Rupen on September 28, 2011 at 9:20pm
Congratulation Anish Ji!